Mayelana NATHI - Omita Lightig
I-Omita Lightig eneRejista ithole ama-RMB angama-20million atholakala ngo-2009.
Njengomklami ovelele, umkhiqizi kanye nokuthumela izinto zangaphandle zokukhanyisa izibani nama-Edison bulbs, imikhiqizo yethu kanye nensizakalo yethu ivunyelwe yikhasimende emhlabeni jikelele.
Sinezimboni ezimbili eziseDongguan City ezine-6000M2 Factory workshop, indawo yokugcina impahla ka-2000M2 ne-400M2 Showroom. Siphinde sibe neqembu lobungcweti kusuka ekuklameni, ekukhiqizeni nasekulawuleni i-QC, nakuMaketha neqembu lokuthengisa.
Okwenzelwe ukukhanyisa, sigxile kakhulu ekukhanyeni kwezivakashi okuhlobisa, ukukhiqiza amahhotela, indawo yokudlela, ibha, iMall nezinye izakhiwo ezisezingeni eliphakeme. ikhandlela le-crystal pendant, ukukhanyisa elengayo, ilambu laphansi, isibani setafula nodonga lwensimbi ngohlelo lokusebenza oluhlukile lwangaphakathi nangaphandle.
Okwezibani zokukhanyisa, singabakhiqizi abahamba phambili bezingilazi ezigcwele zokuhlobisa ingilazi i-Edison, amamodeli amasha amasha angenakubalwa wamaphoyinti ahlukene wokumaketha, intengo ebiza kakhulu yebhizinisi elingcono elikhulayo.Kulula kakhulu ukuthi umlingani wethu enze inzuzo ngemikhiqizo yethu ekhethekile . Noma umkhiqizo wethu we-bulb ukhulu kakhulu, besilokhu silawula ukulawulwa kwekhwalithi eqinile, futhi ukuhlangabezana nezidingo zamakhasimende ngokuzivumelanisa nezimo.
Okokukhanyisa kwentambo, kuyimikhiqizo yokufinyelela kanye nolayini bokukhiqiza ukuqalisa ama-bulb athengisayo. Sinomshini wokubumba we-Injection wokukhiqiza ikhava ye-PC. Siphinde sibe nentambo yokukhiqiza intambo efektri yethu.
Imikhiqizo yethu kanye nensizakalo yethu iye yanabela emazweni angaphezu kwama-27, i-Europea ne-USA njengeMakethe Eyinhloko, kepha futhi sinamabhizinisi kulawo mazwe asathuthuka kakhulu kubandakanya iBrazil, iChile neNingizimu Afrika, iNigeria, iMalaysia.
Iningi lemikhiqizo yethu liqinisekisiwe nge-CE Rohs, futhi nakanjani line-UL ne-SAA.
Ukulalela umbono ohlukile kumakhasimende wembulunga yonke, kuncibilikisa izinto ezahlukahlukene zomkhakha emhlabeni wonke, kudonsa ubuchwepheshe bokugcina obuphezulu ngangokunokwenzeka, kepha ungalokothi ushintshe ingqondo yethu eyinhloko -Ushisekelo lwezinto ezenziwe kahle nemikhiqizo engabizi kubakaki abaningi bomphakathi.
Ukuqhubeka nokukhanyisa ukuphela kwento esiyenzayo.